Waa maxay shuruudda ugu hooseeysa ee sinaanta? Qeexida ereyga 'lexicon'
Start daymaha -Leaks shuruudaha ugu yar ee caasimada
shuruudaha ugu yar ee caasimada
Shuruudaha sinnaanta ugu hooseeya - Maxaa loola jeedaa tan?
Haddii aad xiiseyneyso macaamil ahaan amaah ama deyn su'aasha waa sinaanta barta caadiga ah ee bangiyada. Sinnaanta ayaa go'aamisa inta amaahda ama deynta la go'aamin karo. Taas macnaheedu waa in xitaa haddii sinnaantu had iyo goor aysan aheyn midka ugu muhiimsan, tani waxay leedahay saameyn muhim ah oo ay ku leedahay miisaaniyadda ay bixiso bangi ama hay'ad. Xaaladaha qaarkood, waxaa sidoo kale jira xadka ugu yar. Dhinaca kale, xadka ugu hooseeya ee ku xiga waxay ku xiran tahay bangiga iyo waliba shayga. Taas macnaheedu waxaa weeye in ay jiraan farqi weyn oo kala duwan haddii ay saldhig ka duwan tahay. Maalgashiga ugu yar wuxuu kaloo noqon karaa qiimaha 0. Farqi dheeraad ah ayaa ah haddii maalgelinta ay tahay shay ama shay hantida ah ama si xor ah loo tuuro.
Shuruudaha ugu hooseeya ee Sinnaanta - Waa maxay arimaha loo baahan yahay in loo tixgeliyo macaamil ahaan
Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim u ah maalgashiga ugu yar ama shuruudaha ugu yar ee caasimada in la tixgeliyo. Ugu horreyntii, waa inaad, dabcan, hubi sida macaamil ay bangiyada bixiyaan waxa ay bixiyaan. Halkan waa inaad si gaar ah ugu fiirsataa dulsaarka dulsaar iyo sidoo kale, dabcan, muddada deynta ama amaahda. Waxay macno u tahay waqtigan si aad u hesho dalabyo dhowr ah oo toos ah bangiyada. Tani waxay leedahay sabab fudud. Iyadoo gacan ka heleysa dalabaadkaas mid ayaa ka dhigan kara isbarbardhiga aadka u wanaagsan ee dhinaca kale sidoo kale si gaar ah loogu sameeyey qaddar u gaar ah oo la tixgelinayo. Dhab ahaan codsiga deyn kasta wuxuu ka duwanaan karaa mid kale.
Sidee ayaa loo qiimeeyaa shuruudda ugu yar ee sinaanta
Shuruudaha ugu hooseeya ee sinnaanta waxaa lagu xisaabiyaa bangiyada waxaana loola jeedaa arrimo kala duwan. Iyadoo ku xiran waxa maalgelinta ay walwal ka tahay, qiimahaasi waa dabcan ka duwan. Bir ah in loo tixgeliyo macaamiisha in maalgashiga ugu yar uu yahay xadka ugu hooseeya ee maalgelinta by sinnaanta. Tani waxay ka dhigan tahay qiimaha sareeya waa, dalabyada ugu wanaagsan waxaad heli doontaa macaamiil ka socda bangiyada.
Waa maxay sababta shuruudda ugu hooseeysa ee sinnaanta?
Sinnaanta ayaa muhiim u ah bangiyada laba sababood oo sidaas darteed waa arrin muhiim u ah xisaabinta dulsaarka dulsaarka. Dhinaca kale, sinnaanta la maalgelinayo waxay u taagan tahay khatarta shakhsi ahaaneed ee macaamiisha. Tani waxay ka dhigan tahay isla markaa bangiyada in maalgelintani ay sidoo kale si fiican u fekereyso oo ay ku xirantahay doodaha muhiimka ah. Dhinaca kale, sinnaanta ayaa sidoo kale bangiga siinaysa fursad ay sidaas u yeelato lacagta amaah si loo yareeyo. Taas macnaheedu waxa weeye in khatarta bangiga ay lumiso lacag ay si aad ah u hooseyso maaddaama lacagta deyntu ay aad uga hooseyso maalgelinta dhameystiran.
Gabagabaynta shuruudaha ugu hooseeya ee sinnaanta
Iyada oo kooban kooban, waxaad si dhakhso ah u arki kartaa inta saameynaha shaqsiyadeed ay kaalin weyn ka ciyaaraan maalgashiga ugu yar. Intaa waxaa dheer, dabcan, waxay sidoo kale ku xiran tahay lammaanaha. Badanaa waa bangiyada ama shirkadaha waaweyn. Maalgashadayaasha, dabcan, kaliya waxay doonayaan in ay maalgashadaan guryaha kuwaas, sida ay fikradahooda, sidoo kale faa'iido. Waxay ku socotaa iyada oo aan sheegin in bangiga iyo shirkaddu aysan rabin in ay lacagta ku tuuraan daaqada. Sababtan awgeed, marka laga reebo cadadka sinnaanta, soojeedinta waa muhim muhiim u ah maalgashiga. Tani waxay sidoo kale saameyn doontaa qiimaha xiisaha iyo sidoo kale, dabcan, su'aasha ah in amaahda la oggolaan doono iyo in kale. Sidaa darteed aad ayey muhiim u tahay in adiga, macmiil ahaan, mudnaanta qorshe sax ah si aad u sameyso mashruuca ugu habboon ee suurtogalka ah.
Maqaalka horemaalgelinta Mezzanine
Maqaalka xigtaisticmaalka lacagaha